के तपाई बिहे गर्दै हुनुहुन्छ ? बिहे अघि युवतीलाई सोध्नुपर्ने महत्वपुर्ण ५ प्रश्नहरु जानी राखौँ – Saurahaonline.com
के तपाई बिहे गर्दै हुनुहुन्छ ? बिहे अघि युवतीलाई सोध्नुपर्ने महत्वपुर्ण ५ प्रश्नहरु जानी राखौँ
सौराहा अनलाइन | २०७४, २५ पुष मंगलवार
परिवर्तनशिल समय संगै आधुनिक समाजमा मागी विवाह भन्दा प्रेम बिबाह धेरै हुने गरेको पाइन्छ । तर यदि तपाईहरु मागी विवाह गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने केही महत्वपुर्ण प्रश्नहरु युवतीलाई सोध्नुहोस् । जसले तपाईको जीन्दगीमा नयाँ मोड ल्याउन सक्छ । विहे गर्नु भन्दा पहिला महिलालाई सोध्नुपर्ने प्रश्नहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
१,फ्यूचर प्लानिङको बारेमा पनि छोटो प्रतिक्रिया लिनुहोस् । उसको पहिलो प्राथमिकता के हो ? भन्ने पनि बुझ्नुहोस् । याद गर्नुहोस् फ्यूचर प्लानिङको बारेमा उनले भनेको छोटो प्रतिक्रिया नै महत्वपूर्ण हुनसक्छ ।
२-,सबै भन्दा पहिला केटीको शिक्षाको बारेमा जरुर सोध्नुहोस् । सफल जीवनको पहिलो कडि नै शिक्षा हो । भनिन्छ घरमा महिला शिक्षित भए पुरै परिवार शिक्षित हुन्छ ।
३, आर्थिक मामलामा उनको धारणा के हो त्यो पनि बुझ्नु होस् । तपाईको जिन्दगी सफल पार्नका लागि आर्थिक चिजको भूमिका पहिलो र महत्वपूर्ण हुने गर्छ । तर याद गर्नुहोस् मनी माइन्डेट युवति छ भनेपनि तपाईको जीवन सफल नहुन सक्छ ।
४,उनीसँग के कुरा गर्दा नजिक हुन सकिन्छ जरुर सोध्नुहोस् । उसका साथीहरु कस्ता कस्ता छन् ? भन्ने पनि बुझ्न आवश्यक छ । उनका साथीहरु भनेको उनले सिक्ने खुल्ला विद्यालयहरु पनि हो । किनकी उसको बाल्यकाल त्यही बितेको छ ।
५, त्यसपछि एकअर्काको रुचीहरुको बारेमा सोध्नुहोस् । रुची हेर्दा सानो सानो देखिएपनि मानिसको संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएर आएको हुन्छ । तपाई यसलाई कमजोर सोच्दै नसोच्नुस् । एक अर्काको रुचीहरु मिल्यो भने मात्र जीवन सफल हुन सक्छ ।
ओलम्पिक खेल रद्द गर्न जापानी सत्तारुढ दलका नेताको आग्रह २०७८, २ बैशाख बिहीबार
विक्रमबाबा मेला स्थगित २०७८, २ बैशाख बिहीबार
कोरोना संक्रमण फैलिएपछि दिल्लीमा ‘विकेन्ड कर्फ्यू’ २०७८, २ बैशाख बिहीबार
बागलुङका ३० वनमा आगलागी २०७८, २ बैशाख बिहीबार
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्व अविश्वास प्रस्ताव दर्ता २०७८, २ बैशाख बिहीबार
कोरोनाबाट थप एक महिलाको मृत्यु २०७८, २ बैशाख बिहीबार
टोकियो : जापानको सत्तारुढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी) का दुई प्रभावशाली नेताहरुले टोकियो ओलम्पिकका.....
विक्रमबाबा मेला स्थगित
कोरोना संक्रमण फैलिएपछि दिल्लीमा ‘विकेन्ड कर्फ्यू’
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्व अविश्वास प्रस्ताव दर्ता
टिपर दुर्घटना हुँदा दुईको मृत्यु
भारतमा कोरोना भाइरस सङक्रमितको संख्या १ करोड ४० लाख नाघ्यो